परिर्वतनको घाँटि रेट्ने ज्ञानेन्द्रलाई गणतन्त्र मार्न खोजेको अभियोगमा जेल किन नहाल्ने ?
Wednesday, 11 Jan, 2017 1:38 PM
टिप्प्णी । इतिहासमा कलंकको कालो टिका लगाएर जनताका अगाडी घुडा टेकेका पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह हिजोआज देशको चिन्ता अलि बढी गर्दैछन् । हिजो न्यायका लागि भएका संघर्षहरु दबाउन संकटकाल लगाएर मान्छे मारेर का टाउको गन्न रहर गर्ने ज्ञानेन्द्र शाह आज लोकतन्त्रको हास्यास्पद गफ चुटिरहेका छन् ।
झट्ट हेर्दा ज्ञानेन्द्रको चिन्ता स्वभाविक पनि लाग्छ तर ज्ञानेन्द्रको चिन्ता कुनै मिठो ‘जलेवी’भन्दा कम हानिकार छैन् । ज्ञानेन्द्र यो देशका यस्ता शासक हुन जसले हजारौं नेपालीको हत्या गरेका छन्,संकटकाल र किलोसेरा टु जस्ता भयानक सैन्य अभ्यास चलाएर यो देश तहसनहस पारेका छन् ।
जुन ज्ञानेन्द्रमाथी आफ्नै दाजुको वंशनाश गरेको आरोप जनस्तरबाट लाग्दै आएको छ,उनै महामहिमलाई लोकतन्त्रको चिन्ता,स्वाभिमानको चिन्ता । ज्ञानेन्द्रका अभिव्यक्तीलाई भावनामा होइन,यर्थाथमा महसुस गरौं । इतिहासले गलहत्याए सिहंदरबार निर्मल निवास पुगेका ज्ञानेन्द्र फेरि एकपटक सलबलाई रहेका मात्रै छैनन्,गणतन्त्रमाथी नै प्रहार गर्न खोज्दैछन् आफ्ना कटु र सकुनी अभिव्यक्तीहरुबाट ।
अहिले संविधान कार्यान्वयनको अत्यन्तै जटिल र कठिन तर वाध्यकारी मोडबाट गुज्रिरहेका बेला एकपछि अर्को गर्दै ज्ञानेन्द्रका धारावाहिक प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । हो राजाहरुमा केहि राजाका केहि कदम जनताका पक्षमा थिए होलान्,त्यसको सम्मान गर्नैपर्छ ।
तर इतिहासमा रगतको होली खेलेर रमाएर ज्ञानेन्द्रहरुलाई छुट दिइनु हुदैन् । गणतन्त्र,धर्मनिरपेक्षता र नेपालको परिवर्तन विरुद्ध धावा वोल्ने अधिकार ज्ञानेन्द्र शाहलाई छैन् । तर इतिहासप्रति प्रतिशोध र बदला राख्न खोज्नेहरु भदौरे भेल वा खहरे बन्न सक्छन, तर अविरल सुस्काउने सागर बन्न कदापी सक्दैनन् ।
हो, हामी अहिले जुन आधुनिक नेपालको वर्तमानमा छौं, त्यो प्राचीन इतिहासको निरन्तरताकै उपज र परिणाम हो । यो देश परापूर्वकालदेखि पूर्वज, अग्रजहरुका बहादुरी संघर्ष गाथाहरुले बुनेको देश हो । हामी वा हाम्रा ताकतको मात्रै आर्जन गरेको देश होइन् ।
ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रियताको दुहाइ पाखण्डको नमुना
प्रमुख दलहरुबीच संविधान संशोधनको विषयमा रस्साकस्सी चलिरहेको बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रिय एकता र भावनाको मर्ममाथि निर्मम प्रहार भइरहेको भन्दै विज्ञप्ती जारी गरे ।
उनले विज्ञप्तीमा नेपालीबीचको सामाजिक सद्भाव मेटिँदै छ भन्दै तराई, पहाड र हिमाल माझको ऐक्यभाव तोड्ने भगिरथ प्रयत्न भइरहेको लखेका छन् । उनले यतिमात्रै होइन, निषेधको राजनीति र प्रतिशोधको मानसिकताबाट ग्रसित राष्ट्रका आधार किमार्थ बलियो हुन नसक्ने पनि तर्क गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “अझै पनि जनताका आस्था ढलेका छैनन् । नेपाली मन मष्तिस्कमा देशभक्तिको भावना ढलेको छैन । सबै नेपालीले राष्ट्र बचाउन फेरी एकपटक इतिहासले सुम्पिएको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न र देशको अक्षत अस्तित्व आफ्ना सन्ततिलाई सुम्पन मुखर र प्रखररुपले जाग्नै परेको छ ।” यसबाट बुभ्न सकिन्छ,ज्ञानेन्द्र फेरि एकपटक परिवर्तन विरुद्ध उठ्ने दुस्साहस गर्नेछन् । उनको यो विज्ञप्ती एक ‘इमोसन’ ब्ल्याकमेलबाहेक अरु केहि होइन् । ’बाह्य शक्तिकेन्द्र धाउँदै हिड्ने ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रियताको दुहाइ दिनु कति सुहाँउछ ? एकपछि अर्को डरलाग्दो व्यक्तव्य दिदै हिडेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई राज्यले किन यति छुट दिएको छ ।
गणतन्त्र बलियो बनाऔं
राजा ज्ञानेन्द्रले टाउँको उठाउने मौका पनि यहि राजनीतिक अस्थिरताले दिएको छ । हामीले गणतन्त्र बलियो बनाउँन नसक्दा परिणाम हो,ज्ञानेन्द्रको धावा ।
ठुलो राजनीतिक संघर्षबाट आएको लोकतन्त्र जनताको लागि केवल व्यवस्था परिवर्तनको श्रृखलामा सीमित छ, जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धिका साधन बन्न सकिरहेको छैन् । परिर्वतको दुहाइ दिने दलहरुले यसतर्फ सचेत हुनैपर्छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पछिल्लो समय सिंगापुर र भारत भ्रमण गर्दै आएका छन् । उनले भ्रमणलाई निजि भनेपनि त्यहा राजनीतिक भेटघाट गर्ने गरेका छन् ।
ज्ञानेन्द्रलाई जेल वा देश निकाला
विश्वमा कयौं शासकहरुलाई जनताले सत्ताबाट गह.लहत्याएपछि या त उनिहरुले देश छाडेका छन् या त उनिहरुलाई जेल हालिएको छ । यसरी अर्को शब्दमा भन्ने हो भने ज्ञानेन्द्र शाह त्यही प्रवृतीका पात्र हुन । नेपालको लोकतन्त्र उदार भइदियो जसको परिणाम ज्ञानेन्द्र शाह एकपछि अर्को वक्तव्य र चेतावनी दिइरहेका हुन्छन् । ज्ञानेन्द्र शाह धर्मका नाममा नेपाल हिसां भड्काउन चाहान्छन् । त्यसैले यीनलाई जेल हाल्नुपर्छ वा देश निकाला गर्नूपर्छ ।